Forex Basics Articles | I-FXCC
Imfundo - Imibhalo nezifundo - Forex Basics
Ama-Forex Basics Articles Yazi ngemakethe ye-Forex kanye nezinto ezibalulekile ezizokusiza uqonde izizinda zokuhweba. Zonke izihloko ezinikeziwe zilapha ukukusiza ukuthi uthuthukise ulwazi lwakho futhi ukwandise ukuqwashisa kwakho embonini jikelele.
Yini iMargin yamahhala ku-Forex
Mhlawumbe uke wezwa ngegama elithi "umkhawulo wamahhala" ekuhwebeni kwangaphambili, noma mhlawumbe kuyigama elisha ngokuphelele kuwe. Kunoma ikuphi, kuyisihloko esibalulekile okufanele usiqonde ukuze ube ngumhwebi we-forex omuhle.
Kulo mhlahlandlela, sizodiliza ukuthi imuphi umkhawulo wamahhala oku-forex, ukuthi ungabalwa kanjani, ukuthi uhlobana kanjani nokusizakala, nokunye okuningi.
Ngakho-ke qiniseka ukunamathela kuze kube sekupheleni!
Kuyini ukuhweba ngosuku nge forex
Emhlabeni we-adrenaline wokuhweba ngosuku lwe-forex, noma yini ingenzeka ngokuphazima kweso.
Ukuhweba ngosuku lwe-Forex kungaba ibhizinisi elinenzuzo enkulu (inqobo nje uma ukwenza ngendlela efanele). Kodwa-ke, kungaba nzima kwabaqalayo, ikakhulukazi labo abangazilungiselele ngokuphelele ngecebo elihlelwe kahle.
Ngisho nabathengisi bezinsuku abanolwazi kakhulu bazongena enkingeni balahlekelwe yimali.
Ngakho-ke, yini ngempela ukuhweba ngosuku futhi kusebenza kanjani? Ake sizame ukuthola!
Yini i-Akhawunti Yesimo ku-Forex?
Uma ukhona okusha ekuhwebeni kwangaphambili, bese umbuzo osobala ozovela ekhanda lakho yilokho okuyi- a akhawunti ye-forex yedemo, futhi ungathengisa kanjani ngayo?
Abaqalayo abaningi abanalo nhlobo ulwazi ngama-akhawunti wedemo nokuthi basebenza kanjani.
Kulo mhlahlandlela, sizophendula le mibuzo futhi siveze ukuthi kungani kufanele uqale ukuhweba nge-akhawunti yedemo.
Forex vs. Ukuhweba Ngezitoko
Kulezi zinsuku abadayisi sebekwazi ukufinyelela kwinani elikhulayo lamathuluzi okuhweba, kusuka kumasheya e-FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, neGoogle) emhlabeni osheshayo we-forex.
Ukukhetha phakathi kwalezi zimakethe ozohweba kungaba nzima, futhi kufanele kubhekwe izinto eziningi ukwenza ukukhetha okuhle kakhulu.
Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi umehluko phakathi kwezimakethe ezimbili nokuthi iyiphi okufanele ukhethe ukuhweba ngayo.
Uma ufuna i-newbie ukuqala uhambo lwakho lokuhweba, lo mhlahlandlela uzokusiza.
Amabili Amabili Ahamba Phambili Ezohwebo
Njengoba unamabili amaningi ongakhetha kuwo, ungawakhetha kanjani amabhangqa amahle kakhulu we-forex ukuhweba?
Yebo, yilokhu esizokuthola kulo mhlahlandlela.
Sizodiliza izinhlobo ezahlukahlukene zamabhangqa emali, futhi yiziphi kuzo ezingakhuphula inzuzo yakho.
Yiziphi izinkundla zokuhweba ezihamba phambili ze-Forex?
Uzibuza ukuthi iyiphi ipulatifomu yokuhweba phambili ye forex?
Ungaqageli, njengakulesi siqondisi; sizokutshela amapulatifomu e-forex amahle kakhulu nokuthi iyiphi okufanele uyikhethele amabhizinisi akho okuhweba.
Ungayisebenzisa kanjani iMetaTrader 4?
Uma kungokokuqala ngqa ukusebenzisa ipulatifomu ye-MT4, inani elikhulu lamathebhu, amawindi, nezinkinobho zingakucindezela.
Kepha ungakhathazeki, njengoba, kulo mhlahlandlela, sizokwehla ukuthi ungayisebenzisa kanjani iMetaTrader 4 nokuthi ungazisebenzisa kanjani izici zayo.
Isikhathi Esikahle Sokuhweba Forex
Abasha abaningi bagxumela ngqo emakethe ye-forex. Babheka okuhlukile amakhalenda ezomnotho futhi uhweba kakhulu kukho konke ukuvuselelwa kwedatha, ubona imakethe ye-forex, evulwa amahora angama-24 ngosuku, izinsuku ezinhlanu ngesonto, njengendawo ekahle yokuhweba usuku lonke.
Le ndlela ayikwazi ukuqeda kalula kuphela izinto ezigciniwe zomthengisi, kepha ingashisa ngisho nomthengisi ophikelela kakhulu.
Yini iScalping ku-Forex?
Uma unayo ngisanda kuqala ukuhweba nge-forex, kungenzeka ukuthi uhlangabezane negama elithi "Scalping." Kulo mhlahlandlela, sizoxoxa ngokuthi yini i-scalping ku-forex nokuthi kungani kusho ukuthi yi-scalper.
I-Scalping yigama elibhekisa enkambisweni yokweqa inzuzo encane nsuku zonke ngokungena nokuphuma ezikhundleni izikhathi eziningana ngosuku.
Yini i-Price Action ku-Forex?
Mhlawumbe uzwile igama elithi "isenzo sentengo" emsebenzini wakho wansuku zonke wokuhweba, kepha kwabanye, kungafana nokuxazulula izibalo eziyinkimbinkimbi ze-algebraic. Ungaphikisani; njengakulesi siqondisi, sizongena ekuthini isenzo senani ku-forex. Ngakho-ke, uma usaqala, uzothola lo mhlahlandlela uthakazelisa.